Joshụa 24 Baịbụl Nsụgharị Ụwa Ọhụrụ nke Dị n'Ịntanet
Joshụa kọọrọ ndị Izrel otú Jehova si na-edu ha kemgbe (1-13)
Joshụa gbara ndị Izrel ume ka ha na-efe Jehova (14-24)
“Mụ na ezinụlọ m ga-efe Jehova” (15)
Joshụa na ndị Izrel gbara ndụ (25-28)
Joshụa nwụrụ, e lie ya (29-31)
Na Shikem ka e liri ọkpụkpụ Josef (32)
Elieza nwụrụ, e lie ya (33)
24 Joshụa wee kpọọ ebo niile n’Izrel, ha agbakọọ na Shikem. Ọ kpọrọ ma ndị okenye Izrel, ma ndị isi ha, ma ndị ikpe ha, ma ndị ndú ha,+ ha abịa guzoro n’ihu ezi Chineke. 2 Joshụa wee sị ha niile: “Jehova bụ́ Chineke Izrel sịrị, ‘Ọ bụ n’ebe ọwụwa anyanwụ Osimiri Yufretis ka nna nna unu hà+ biri ọtụtụ afọ gara aga.+ Tira nna Ebreham na nna Nehọ so na ha. Ha na-efebukwa chi ọzọ.+ 3 “‘Ka oge na-aga, m si n’ebe ọwụwa anyanwụ Osimiri Yufretis kpọrọ nna nna unu Ebreham+ kpọgharịa ya n’ala Kenan niile. M mekwara ka ụmụ* ya dị ọtụtụ.+ Ọ bụ m mere ka ọ mụta Aịzik.+ 4 Ọ bụ m mekwara ka Aịzik mụta Jekọb na Ịsọ.+ E mechaa, m nyere Ịsọ Ugwu Sia ka ọ bụrụ nke ya.+ Ma, Jekọb na ụmụ ya kwagara Ijipt.+ 5 Emechakwara m ziga Mosis na Erọn+ ka ha nyere unu aka. Atakwara m ndị Ijipt ezigbo ahụhụ,+ ma kpọpụtazie unu ebe ahụ. 6 Mgbe m si n’Ijipt na-akpọpụta nna nna unu hà,+ ha erutekwa n’oké osimiri, ndị agha Ijipt ji ịnyịnya na ụgbọ ịnyịnya ha chụrụ ha rute n’Oké Osimiri Uhie.+ 7 Ha wee malite itiku mụnwa bụ́ Jehova ka m nyere ha aka.+ M wee mee ka ọchịchịrị dị n’agbata ha na ndị Ijipt, meekwa ka oké osimiri ahụ rie ndị Ijipt.+ Ha jikwa anya ha hụ ihe m mere n’Ijipt.+ Ha bikwara n’ala ịkpa ọtụtụ afọ.*+ 8 “‘M kpọbatakwara unu n’ala ndị Amọraịt, ndị bi n’ebe ọwụwa anyanwụ Osimiri Jọdan, ha alụso unu agha.+ Ma, m nyefere ha n’aka unu ka unu weghara ala ha. Unu hụkwara otú m si laa ha n’iyi.+ 9 Belak nwa Zipọ, bụ́ eze Moab, lụsokwara ndị Izrel agha. Ọ gara kpọta Belam nwa Biọ ka ọ bụọ unu ọnụ.+ 10 Ma egeghị m Belam ntị.+ Ọ bụ ya mere o ji gọzie unu ugboro ugboro,+ mụ anapụta unu n’aka ya.+ 11 “‘Unu gafekwara Osimiri Jọdan+ rute Jeriko.+ Ndị na-achị* Jeriko, ndị Amọraịt, ndị Perizaịt, ndị Kenan, ndị Het, ndị Gegash, ndị Haịvaịt, na ndị Jebus lụsokwara unu agha. Ma, m nyefere ha n’aka unu.+ 12 M mere ka ike ịlụso unu agha gwụ ha niile, nke na ndị eze abụọ na-achị ndị Amọraịt gbara ọsọ n’ihi unu.+ Ọ bụghị mma agha unu ma ọ bụ ụta unu mere ha ji gbaa ọsọ.+ 13 Otú a ka m si nye unu ala unu na-agbaghị mbọ nweta, nyekwa unu obodo ndị unu na-arụghị,+ unu ebiri n’ime ha. Ọ bụkwa ihe si n’ubi vaịn na ubi oliv unu na-akụghị ka unu na-eri.’+ 14 “N’ihi ya, tụọnụ egwu Jehova, na-akpanụ àgwà dị mma,*+ jirikwanụ obi unu niile na-efe ya. Wepụkwanụ chi niile nna nna unu hà fere mgbe ha nọ n’ebe ọwụwa anyanwụ Osimiri Yufretis nakwa n’Ijipt.+ Na-efekwanụ Jehova. 15 Ugbu a, ọ bụrụ na ife Jehova adịghị unu mma, họrọnụ taa onye unu ga-efe,+ ma ọ̀ bụ chi niile nna nna unu hà fere n’ebe ọwụwa anyanwụ Osimiri Yufretis,+ ma ọ̀ bụ chi niile nke ndị Amọraịt, ndị unu bi n’ala ha.+ Ma, mụ na ezinụlọ m ga-efe Jehova.” 16 Ha niile wee sị ya: “Tụfịakwa! Anyị agaghị ahapụ Jehova fewe chi ọzọ. 17 Ọ bụ Jehova bụ́ Chineke anyị si n’Ijipt, n’ala anyị nọ na-agba ohu,+ kpọpụta anyị na nna nna anyị hà.+ Ọ rụkwara ọrụ ebube ndị anyị ji anya anyị hụ,+ chebekwa anyị n’ụzọ niile anyị gara. O kweghịkwa ka ndị niile anyị si n’obodo ha gafee kpa anyị aka.+ 18 Jehova chụpụkwaara anyị ma ndị Amọraịt ma ndị ọzọ niile bi n’ala a tupu anyị ebiri na ya. N’ihi ya, anyịnwa ga-efekwa Jehova, n’ihi na ọ bụ Chineke anyị.” 19 Joshụa wee sị ha: “Unu agaghị efeli Jehova, n’ihi na ọ bụ Chineke dị nsọ.+ Ọ bụ Chineke nke chọrọ ka a na-efe naanị ya.+ Ọ bụrụ na unu anaghị efe naanị ya, ọ gaghị agbaghara unu ma unu nupụrụ ya isi ma ọ bụkwanụ ma unu mehie ya.+ 20 N’agbanyeghị na Jehova emeerela unu ihe ọma, ọ bụrụ na unu ahapụ ya, fewe chi ndị mba ọzọ, ọ ga-ata unu ahụhụ, kpochapụkwa unu.”+ 21 Ma, ha niile sịrị Joshụa: “N’eziokwu, ọ bụ Jehova ka anyị ga-efe.”+ 22 Joshụa wee sị ha: “Unu bụ ndị akaebe na ọ bụ unu ji aka unu họrọ ife Jehova.”+ Ha asị: “Anyị bụ ndị akaebe.” 23 Joshụa asịzie ha: “N’ihi ya, wepụnụ chi ndị mba ọzọ dị n’ala a unu bi, jirikwanụ obi unu niile na-efe Jehova bụ́ Chineke Izrel.” 24 Ha niile asị Joshụa: “Anyị ga na-efe Jehova bụ́ Chineke anyị, na-erubekwara ya isi.” 25 Joshụa na ndị Izrel wee gbaa ndụ n’ụbọchị ahụ. Ọ nọkwa na Shikem gwa ha iwu ha ga na-edebe. 26 Joshụa dekwara ihe ọ gwara ha n’akwụkwọ e dere Iwu Chineke.+ O busakwara otu nnukwu nkume+ n’okpuru osisi gbara agba nke dị n’akụkụ ebe Jehova doro nsọ. 27 Joshụa gwakwara ha niile, sị: “Nkume a ga na-echetara anyị ihe ndị a,+ n’ihi na ọ nụla ihe niile Jehova gwara anyị. Unu gọnahụ Chineke unu, nkume a ga-agbakwa akaebe na unu gọnahụrụ ya.” 28 Joshụa wee gwa ha niile ka ha lawa, onye nke ọ bụla alawa n’ala o ketara.+ 29 Mgbe ihe ndị a gachara, Joshụa nwa Nọn, bụ́ ohu Jehova, nwụrụ mgbe ọ gbara otu narị afọ na iri (110).+ 30 Ha wee lie ya n’ala o ketara na Timnat-sira,+ nke dị n’ala Ifrem bụ́ ugwu ugwu, n’ebe ugwu nke Ugwu Geash. 31 Ndị Izrel wee na-efe Jehova n’oge niile Joshụa nọ ndụ nakwa n’oge niile ndị okenye, ndị Joshụa bu ụzọ nwụọ, nọ ndụ, ya bụ, ndị hụrụ ihe niile Jehova meere ndị Izrel.+ 32 Na Shikem ka ndị Izrel liri ọkpụkpụ Josef+ ha chịịrị si n’Ijipt pụta. Ha liri ya n’ala Jekọb zụrụ ụmụ Hemọ,+ nna Shikem. Ọ zụrụ ya otu narị (100) mkpụrụ ego.+ Ọ bụkwa ụmụ Josef ketara ala ahụ.+ 33 Elieza nwa Erọn nwụkwara.+ Ha wee lie ya n’Ugwu Finihas nwa ya,+ nke o ketara n’ala Ifrem bụ́ ugwu ugwu.
^ O nwere ike ịbụ, “Ndị nwe ala.”
^ Ma ọ bụ “na-emenụ ihe otú a na-agaghị ata unu ụta.”